Global Voices teny Malagasy » Afaka mampaniry nify ve ny NETmundial? · Global Voices teny Malagasy » Print
Afaka mampaniry nify ve ny NETmundial?
Voadika ny 29 Avrily 2019 21:25 GMT 1	 · Mpanoratra Sarah Myers West Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Brezila, Lahavolana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Solovava, Zon'olombelona, Fitantanana-aterineto, GV Mpisolovava
Mitatitra mivantana ny fivoriana maneran-tany an'ny NETmundial  mikasika ny fitantanana ny Aterineto atao ny 23 ka hatramin'ny 24 Avrily any Sao Polo any Brezila i Marianne Diaz sy i Sarah Myers, mpikambana ao amin'ny Advox. Nivory ireo mpisolotena ny fiarahamonin'olontsotra, orinasa sy ireo governemanta manerana ny tany mba hiadiana hevitra mikasika ny fitantanana ny Aterineto ao anatin'ny tontolo taorian'ny Snowden. Ampahany tamin'ny andiana tatitra mikasika izany tranga izany ity lahatsoratra ity.
Ny andro faharoa tamin'ny NETmundial, raha toa ka nirotsaka tao anatin'ny dingana fifampiraharahana momba ny ”tahirinkevitra farany” ireo mpandray anjara – ilay vokany tsy nahazo ny anarana sahaza azy saingy zava-dehibe indrindra tamin'ilay fihaonana manerantany mikasika ny fitantanana ny Aterineto — maro ireo manontany mikasika ny zavatra tena tadiavin'ilay tahirinkevitra hotontosaina. Satria tokoa hetsika tsy manam-paharoa izany, tsy misy sehatra ara-pitsarana izay hahafahana manameloka na iza na iza ho tomponandraikitra amin'ireo vokatra ireo. Noho izany, inona ary no ataontsika rehetra eto?
Tao anatin'ireo volana maro talohan'ilay fivoriana, vondrona teo amin'ny 200 sy olona avy amin'ny sehatra rehetra eo anivon'ny fiarahamonina no nanolotra tolokevitra mifandraika amina andiana fotokevitra sy tondrozotra ho an'ilay dingana iraisam-pirenena momba ny fitantanana ny Aterineto. Fotoana fohy talohan'ny fiandohan'ilay fivoriana, navoaka ny dika volavola avy amin'ilay tahirinkevitra farany, izay niezaka ny hanangona ireo tolotra ireo.
Fandraisana anjara avy lavitra avy tany Indonezia, NETmundial
Ankehitriny, rehefa efa tena nanomboka ilay fivoriana, miha-mafana ilay dingana. Nozaraina ilay resaka ho lasa andiana vondronasa natao mba hanadihadiana ireo fizaràna ao amin'ilay tahirinkevitra, sady andiana fotokevitra no tondrozotra ho an'ny Aterineto. Afaka manome ny heviny mandritra ny roa minitra avy ireo mpandray anjara, miaraka amin'ny mikrô fitenenan nomena ny vondrona mpisolotena tsirairay avy – fiarahamonin'olontsotra, vondrom-piarahamonina avy amin'ny anjerimanontolo / teknika, governemanta ary sehatra tsy miankina. Nohamorain'ny lahatsary tsy tapaka, nahitana fanontaniana sy fanamarihana avy tany Hong Kong, Tonizia sy Nizeria ny fandraisan'ireo foibe manerantany rehetra anjara avy any lavitra. Namaly ireo fanontaniana ireo hatramin'ny 4ora maraina tamin'ny Talata ny vondrona mpandray anjara tany India. Raha toa ka niatrika tsikera avy tany amin'ireo mpandray anjara tao amin'ny twitter ireo kabary lava be tamin'ny fomban'ny Firenena Mikambana, noraisina tsara kosa ilay dingana.
Nitaraina ny tsy nampidirana ireo tolokeviny tao anatin'ilay tahirinkevitra farany ny vondrona mpandray anjara iray, samy mpisolotenan'ny governemanta avokoa na dia nanoro hevitra aza ireo mpikambana tao anatin'ireo mpitsara fa izany dia noho ny olana ara-dingana kokoa toy ny fahataran'ny fanolorana fa tsy fanavakavahana niniana natao. Samy mahatsapa ho voafehin'ny fe-potoana avokoa ny olona rehetra tao am-pivoriana — asa mafy ny fanatontosana ny tanjon'ny NETmundial ao anatin'ny roa andro.
Nisy adihevitra lehibe ihany koa nikasika ny zavatra tokony atao miaraka amin'ilay tahirinkevitra farany — ahitana ny fandefasana izany amin'ny Sehatra Fifanakalozan-kevitra momba ny Fitantanana ny Aterineto izay hatao any Tiorkia ny volana Septambra, na an'ny fitantanan'ny Filoha Breziliana Dilma Rousseff ny manano ny fanolorana izany manoloana ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana. Ny fanohanan'itsy na iroa dia ho fanambarana mahery ary ho tombony amin'ny maha-ara-drariny an'ilay tahirinkevitra, indrindra indrindra ho an'ireo liana amin'ny fiandrianampirenena sy ny multilatéralisme, saingy tsy azo antoka izany.
Raha toa ka eken'ny maro ny dingana fifampiraharahàna mikasika ilay tahirinkevitra, hanana endrika hafa amin'ny maha-ara-drariny azy izany, mifanaraka amin'ny toetry ny Aterineto marosampana. Ho noforonina tamin'ny alalan'ny fifanarahana vondrona mpanonofin'ny Aterineto, mpiaro ny fiarahamonin'olontsotra, mpitondra ao amin'ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina maro izany. Na tsy hanome antoka hetsika mivaingana avy amin'ireo governemanta aza izany, mety ho isanà zavatra hisy lanjany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/30/137512/